हामीलाई किन चाहिन्छ भिटामिन बी कम्प्लेक्स ,कमी भए के हुन्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperहामीलाई किन चाहिन्छ भिटामिन बी कम्प्लेक्स ,कमी भए के हुन्छ ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
किन चाहिन्छ भिटामिन बी कम्प्लेक्स
भिटामिन बी कम्प्लेक्सले शरिरमा मोटाबलिज्म बढाउँछ। मोटाबलिज्मले पोषक तत्वलाई शक्तिमा बदल्ने काम गर्छ। यसले डिएनए बनाउने काम पनि गर्छ। राता रक्तकोष निमार्ण पनि भिटामिन बी कम्प्लेक्सले गर्छ। यसले शरिरको बिभिन्न भागका लागि प्रोटीन बनाउने काम पनि गर्छ।
भिटामिन बी कम्प्लेक्स कमी भए के हुन्छ?
१ हात/खुट्टा झमझम गर्ने
२ हात/खुट्टा पोल्ने
३ स्मरण शक्ति हस
४ कमजोरी महसूस हुने
भिटामिन बी १२ को रासायनिक नाम ‘सायनोकाबालामीन’ हो। यो छाला, हड्डी, काशिका, मांसपेशिका लागि आवश्यक हुन्छ। यो मासु, माछा, अण्डा आदीमा पाइन्छ। भिटामिन बी कम्प्लेक्समा नाइकोटोनिक एसिड, बायोटीन, पैन्टोथेनिक एसिड र फोलिक एसिड पनि पाइन्छ।
भिटामिन बी कम्प्लेक्स